सन्दर्भ गिरिजाबाबुको ९८ औं जन्मदिन : कठिन परिस्थितीमा अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाए, अन्तमा उनैको धोकाले मुलुक गणतन्त्रको वाटोमा पुग्यो - अन्वेषी मिडिया प्रा .लि.
सन्दर्भ गिरिजाबाबुको ९८ औं जन्मदिन : कठिन परिस्थितीमा अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाए, अन्तमा उनैको धोकाले मुलुक गणतन्त्रको वाटोमा पुग्यो
अन्वेषण सम्वाददाता ११ महिना पहिले
छलफल चलिरहदा डा.रामवरण यादव आईपुगे । उनी भन्दै थिए ‘कांग्रेस र राजाको सम्वन्ध विगार्ने यहाँ केही मानिसहरु सकृय छन् । त्यो वाटोमा जानुहुन्न गिरिजावावु । राजा नियुक्ति गर्नु पर्छ नत्र भाडभैलो हुन्छ ।’
युवराज दीपेन्द्र जेठ २० गते विहान राजा घोषित भए । त्यसको तेस्रो दिन जेठ २२ गते विहान ३.४५ वजे उनको मृत्युको घोषणा भयो । राजपरिषद्को निर्णय अनुसार त्यसै दिन राज्य सहायक ज्ञानेन्द्रले नयाँ राजाका रुपमा राज्यारोहण गरे । संयोग नै मान्नु पर्छ रोलक्रममै नभएका ज्ञानेन्द्र दुई दुई पटक मुलुकको राजा हुन पुगे । २००७ सालमा पिता महेन्द्र भन्दा अघि राजगद्दीमा वसेका उनी फेरी भतिजा दिपेन्द्र पछि राजा भए ।
दुवै पटक उनको राज्यारोहणलाई ठूलो जनमतले स्वीकार गर्न सकेन । पहिलो पटक राजा त्रिभुवनले भारतमा शरण लिएका कारण जनतामा आक्रोश थियो, दोस्रो पटक दरवार हत्याकाण्डमा उनको हात छ भन्ने धेरैलाई परेको थियो । वीरेन्द्रको वंशनाश हुनु अघिसम्म ‘राजालाई विष्णुको अवतार मान्ने जनताको कमी थिएन, तर दरवार हत्याकाण्ड पछि विष्णुको मृत्यु भैसक्यो भन्ने आम वझुाई वनि सकेको थियो (आनन्द, २०६० ः १५६)।’
संसद बैठक वोलाएर हत्याकाण्डका वारे जनतालाई यथार्थ जानकारी दिनु पर्छ र राजा राख्ने वा नराख्ने भन्ने बिषयको टुंगो समेत लगाउनु पर्छ वहस तिव्र थियो । एकातिर चक्र लगायत मन्त्रीपरिषद्का कतिपय सदस्यको यही मत थियो । अर्कोतिर राजगद्वि एक छिन पनि खाली राख्न हुन्न भन्ने परम्पराका कारण तत्काल नयाँ राजा नियुक्त गर्नु पर्छ भन्ने विचार थियो ।
अर्को थरी मानिसहरु राजतन्त्रको अन्त्य भैसकेकाले सिधै गणतन्त्रमा जानु पर्छ भन्ने माहौल वनाउन लागि परेका थिए । खास गरी माओवादीहरु यो विचारलाई जोडतोडले उचालिरहेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कोइराला के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगि सकेका थिएनन् । जेठ २० गते विहानै उनले सल्लाहकार पुनञ्जन आचार्यलाई वेडरुममा बोलाए ।
कोइराला ः ‘महेशसंग कुरा ग¥यौ के छ तिम्रो र महेशको विचार ।
पुरञ्जन ः ‘गिरिजादाजु जे भयो भयो, अव संसदमा वहस त चलाउनु पर्छ । महेश दाको पनि यही विचार छ । दुई चार दिन राजा नियुक्त नगर्दा केही फरक पर्दैन । आज वहादुर भवन (राजपरिषदको बैठकमा) नजाउ ।’
तर त्यस अघि छाउनीमै नया“ राजा नियुत्ति गर्ने कुरामा सहमति जनाउदै कोइरालाले कार्यविधिमा समेत सही गरि सकेका थिए ।
संविधानले राजतन्त्र वारे सदनमा वहस चलाउन रोक लगाएको थियो । तर राजाका सन्तान समेत वाँकी नरहेको अवस्थामा चक्र, महेश, आमोद, नरहरी लगायतका नेताहरु नयाँ राजतन्त्र वनाउने की नवनाउने भन्ने विषयलाई संसदीय वहसमा ल्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमै थिए ।
यस्तै छलफल चलि रहदा रक्षामन्त्री आचार्य टुप्लुक्क वालुवाटार पुगे । विराटनगरमा रहेका उनलाई लिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले विहानै हेलिकप्टर पठाएका थिए ।
महेश ः ‘संसदमा छलफल गराउ गिरिजावावु । जनतामा यत्रो आक्रोश छ । वास्तविकता के हो ? जनताले संसद मार्फत थाहा पाउनु पर्छ यो व्यवस्थाको मर्म र भावना पनि त्यही हो । नयाँ राजा वनाउन किन हातर गर्ने, अलि छलफल गरेर गर्दा राम्रो हुन्छ ।’
कोइराला ः .(अलि रिसाएर) कहाँ यार यस्तो वेलामा । सामान्य कुरा भए त वाहिर जान्छ । नराम्रो असर पर्छ ।
यति भनेर प्रधानमन्त्री निलो वैठक कक्षवाट उठे र माथिल्लो तलतिर लागे । सिढि उक्लिनु अघि पुरञ्जनलाई बोलाए । सयन कक्ष नजिक पुगे पछि भन्न थाले ‘त्यो महेशलाई किन जान्ने हुनु परेको ? नरहरीले त भने भने महेशले किन वोल्नु परेको ? वहादुर भवन जानु पर्छ, राजा नियुक्त गर्नु पर्छ । नत्र कम्युनिष्टहरुले टेक ओभर गर्छन् । कम्युनिष्टहरुलाई खुल्ला छोड्ने ? कस्तो नवुझेको त्यो महेशले सम्झाउ ।’
पुरञ्जन ः तपाई सम्झाउनुस् न गिरिजादाई । म माथि वोलाउछु । तपाईलाई सम्झाउने मानिस मैले सम्झाएर मान्नुहुन्छ र ?’
कोइराला ः हैन पहिला तिमी कुरा गर ।
तल ओर्लिएर पुरञ्जनले रक्षमन्त्री आचार्यलाई भने ‘गिरिजादाई राजा नियुक्त गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ ।’ महेश भन्न थाले ‘हैन भाई वहस त चलाउनु पर्छ । त्यो राम्रो देखिन्छ, जनताले पनि सबै कुरा त वुझ्नु प-यो नी ।’ यति कुरा गरे पछि महेश प्रधानमन्त्रीको कोठामा छिरे । आचार्यलाई कोइरालाले भने ‘नरहरीले वोले, ठिकै छ तर तिमीले वोल्दा महेश, दरवार र सेना दुवैले मैले नै वोलेको ठान्छन् त्यसकारण तिमी वोल्नुहुन्न ।’
हुने घटना भै हाल्यो, अव यसलाई उछालेर राजतन्त्रलाई वदनाम गर्नु हुन्न भनेर प्रधानमन्त्रीले संसदमा छलफल गराउन मानेनन् । त्यसरी अप्ठेरोमा परेका ज्ञानेन्द्रलाई कोइरालाको आडले राजा हुने अवसर मिल्यो । त्यसैले नयाँ राजाबाट असहयोग हुदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको वुझाई थियो । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार पुरञ्जन आचार्यले लेखकलाई सुनाए ‘राजा भए देखि नै ज्ञानेन्द्रका सबै व्यवहार कसरी संसदीय व्यवस्था र पद्वती समाप्त पार्ने भन्नेमा केन्द्रीत हुन थाले । त्यसैले उहाँ पनि सक हुनुभयो ।’
clopidogrel price - <a href="https://twarfarin.com/">cheap warfarin 5mg</a> order metoclopramide 20mg for sale
buy cyclobenzaprine 15mg pill - <a href="https://rketorolac.com/">order toradol 10mg generic</a> buy propranolol online cheap
isotretinoin 10mg ca - <a href="https://razithromycin.com/">order azithromycin generic</a> tetracycline 500mg without prescription
modafinil 200mg brand - <a href="https://rpmodafinil.com/">oral provigil 100mg</a> order rhinocort pill
viagra 25 mg - <a href="https://rtadalafil.store/">cialis 10mg generic</a> generic tadalafil
brand cenforce - <a href="https://xrosuvastatin.com/">order generic rosuvastatin</a> purchase motilium generic
furosemide 100mg brand - <a href="https://doxycycliner.com/">purchase doxycycline for sale</a> doxycycline 100mg cost
buy generic diltiazem 180mg - <a href="https://prednisolones.com/">order prednisolone 10mg online cheap</a> neurontin 600mg pills
deltasone 5mg cost - <a href="https://amoxicilli.store/">amoxicillin 1000mg generic</a> amoxicillin 500mg pills
clarinex drug - <a href="https://aristocortgx.com/">triamcinolone 10mg generic</a> purchase triamcinolone generic
clomiphene 50mg for sale - <a href="https://ventolingx.com/">ventolin inhalator brand</a> buy cetirizine 10mg sale
ivermectin 6mg - <a href="https://stromecstp.com/">buy ivermectin uk</a> stromectol 12mg
tadalafil 20mg drug - <a href="https://sildenafilpfl.com/">sildenafil for men</a> order sildenafil 50mg generic
purchase metoprolol - <a href="https://metoprololpl.com/">cost lopressor 100mg</a> tadalafil 10mg generic
buy amlodipine 5mg online - <a href="https://lisinoprilpl.com/">lisinopril 2.5mg canada</a> prilosec order
order glucophage 500mg sale - <a href="https://metforminp.com/">purchase glucophage sale</a> buy atorvastatin 20mg generic
order generic baricitinib 4mg - <a href="https://dapoxetinepl.com/">dapoxetine 90mg canada</a> order generic dapoxetine 60mg
buy azithromycin 500mg online cheap - <a href="https://medrolas.com/">buy medrol uk</a> buy medrol 16mg
ivermectin 1 cream generic - <a href="https://azithromycinlx.com/">buy generic zithromax 500mg</a> order zithromax generic
buy generic tadalafil 20mg - <a href="https://ctadalapls.com/">order cialis 10mg</a> tadalafil over counter
amoxicillin 500mg for sale - <a href="https://amoxillixp.com/">order amoxicillin 500mg online</a> sildenafil 100mg over the counter
prednisone 40mg us - <a href="https://prednisopll.com/">prednisone 40mg without prescription</a> order accutane 10mg
slot machines - <a href="https://slogamex.com/">free slots games</a> prednisone over the counter
order tadalafil 10mg online cheap - <a href="https://ivermectistrm.com/">ivermectin tablets order</a> erection pills online
order generic cialis 10mg - <a href="https://tadalafix.com/">cialis 5mg pill</a> stromectol otc
sildenafil 100mg usa - <a href="https://sildenafilxu.com/">generic sildenafil 50mg</a> zantac cost
careprost brand - <a href="https://careprostx.com/">bimatoprost for sale</a> cheap desyrel 100mg
budesonide brand - <a href="https://budesonidex.com/">order generic rhinocort</a> order generic cefuroxime
fildena 50mg usa - <a href="https://tamoxifenxr.com/">nolvadex 20mg without prescription</a> antabuse uk
cephalexin 500mg brand - <a href="https://cleocinx.com/">cleocin 300mg usa</a> erythromycin brand
ivermectin 400 mg - <a href="https://stromectolpl.com/">stromectol price</a> ivermectin lice
purchase hydroxychloroquine sale - <a href="https://plaquenx.com/">hydroxychloroquine 400mg price</a> order plaquenil for sale
order cialis 20mg pill - <a href="https://gntadalafi.com/">cialis mail order</a> cialis tadalafil 20mg